हिन्दू मन्दिरको रहस्य - NewsPolar NewsPolar
२८ जेष्ठ २०७९, शनिबार ०६:४१
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कहिलेदेखि मन्दिर बनाएर पूजा गर्न थाले ? आखिर हिन्दू मन्दिर निर्माण कहिले र किन सुरु भयो ? मन्दिरको प्राचीनताको प्रमाण के हो ? के हिन्दू मन्दिरहरूमा प्राचीन समयमा मूर्ति पूजा थियो ? नभए मन्दिरमा के हुन्थ्यो होला ?
वैदिक कालमा न त मन्दिर थियो न मूर्तिहरू। वैदिक समाज एकै ठाउँमा भेला हुन्थ्यो र ब्रह्म (ईश्वर) प्रति आफ्नो भक्ति व्यक्त गर्न एउटै वेदीमा उभिने गर्दथ्यो। यसका साथै यज्ञमार्फत भगवान् र प्रकृतिका तत्वहरूलाई आह्वान र प्रार्थना पनि गर्दथ्यो ।
शिवलिंगको पूजा गर्ने चलन परापूर्वकालदेखि चलिआएको छ । शिवलिंगको पूजा गरेपछि विस्तारै हिन्दु–जैन धर्ममा नाग र यक्षको पूजा गर्ने चलन बढ्न थाल्यो ।
बुद्धकालमा बुद्ध र महावीरको मूर्तिलाई जनसमर्थन प्राप्त भएकाले राम र कृष्णका मूर्ति बनाउन थालिएको हो ।
प्राचीन कालमा देवी–देवताका लागि छुट्टाछुट्टै पूजास्थल र पूजा–अर्चनाका लागि छुट्टाछुट्टै ठाउँहरू थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। वैदिक कालमा वैदिक ऋषिहरूले वनमा रहेका आश्रमहरूमा ध्यान, प्रार्थना र यज्ञ गर्थे।
तर आत्मनिरीक्षण, चिन्तन र बहस जति लोकजीवनमा मन्दिरको महत्व थिएन । तैपनि सर्वसाधारणले इन्द्र, विष्णु, लक्ष्मी, शिव र पार्वती बाहेक सहर, गाउँ र स्थानका देवताको पूजा गर्ने गर्दथे । अन्य धेरै समुदायमा शिव र पार्वतीसँगै यक्ष, नाग, पितृ, ग्रह–नक्षत्र आदिको पूजा पनि प्रचलित थियो।
वैदिक कालमा नै विश्वभर चार धाम र ज्योतिर्लिङ्गको स्थापनासँगै पूजा गर्नका लागि भव्य मन्दिरहरू निर्माण भएका थिए। समय–समयमा तिनीहरूको रूप र संस्कार पनि परिवर्तन हुँदै गयो।
मन्दिरको अर्थ हो ‘मनबाट टाढा कुनै पनि ठाउँ’। मन्दिरको शाब्दिक अर्थ ‘घर’ हो र मन्दिरलाई ‘द्वारा’ पनि भनिन्छ, जस्तै रामद्वारा, गुरुद्वारा आदि। मन्दिरलाई ‘आलय’ पनि भन्न सकिन्छ, जस्तै शिवालय, जिनालय आदि। तर मनबाट टाढा भएको मन्दिर भन्दा त्यसको अर्थ बदलिन्छ।
द्वारा जुनसुकै भगवान्, देवता वा गुरुको पनि हुन्छ, आलय शिवको लागि मात्र हो र मन्दिर वा स्तूपहरू ध्यान–प्रार्थनाका लागि मात्र हुन्, तर वर्तमानमा माथिका सबै स्थानलाई ‘मन्दिर’ भनिन्छ जसमा कुनै देवताको मूर्तिको पूजा गरिन्छ।
मनबाट टाढा बसेर निराकार भगवानको पूजा वा ध्यान गर्ने ठाउँलाई ‘मन्दिर’ भनिन्छ। जसरी जुत्ता फुकालेर मन्दिर प्रवेश गर्छौं, त्यसैगरी मन र अहंकार पनि बाहिर छाडिन्छ।
देवताहरूको पूजा गर्ने ठाउँलाई ‘देवरा’ वा ‘देवस्थान’ भनिन्छ। जहाँ पूजा हुन्छ त्यसलाई पूजास्थल भनिन्छ, जहाँ प्रार्थना हुन्छ त्यसलाई प्रार्थना हल भनिन्छ। वेदज्ञहरूको विश्वास छ, ‘भगवान प्रार्थनाद्वारा प्रसन्न हुन्छन्, पूजाद्वारा होइन।’
मन्दिरहरु पिरामिड आकारका हुन्छन्
परापूर्वकालदेखि जुनसुकै धर्मका मानिसहरूले पूर्णरूपमा ध्यान गर्न सक्ने, मन एकाग्र गर्न वा भगवान्प्रति भक्ति व्यक्त गर्न सकिने ठाउँमा सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्दै आएका छन्, त्यसैले मन्दिर निर्माणमा वास्तुको ख्याल राखिन्छ। भारत वर्षका प्राचीन मन्दिरहरू हेर्दा सबैको वास्तुकला निकै बलियो थियो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यहाँ जाँदा अहिले पनि शान्ति महसुस हुन्छ ।
यदि तपाईंले प्राचीन समयका मन्दिरहरूको निर्माणलाई हेर्नुभयो भने तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ कि सबै पिरामिड आकारमा थिए। सुरुदेखि नै हाम्रा धर्मशास्त्रीहरूले पिरामिडको आकारमा मन्दिर निर्माण गर्ने सोचेका छन्।
ऋषि–मुनिहरूको झुपडी पनि एउटै आकारको थियो। हाम्रा पुराना घरको छाना पनि त्यस्तै थियो । पछि रोमन, चिनियाँ, अरब र ग्रीक वास्तुकलाको प्रभावले मन्दिरहरूको वास्तुकलामा परिवर्तन हुँदै गयो।
मन्दिर पिरामिड आकार र पूर्व, उत्तर वा उत्तर पूर्वमुखी हुन्छ। धेरै मन्दिरहरू पश्चिम, दक्षिण, आग्नेय वा दक्षिणपूर्व पनि छन्, तर के हामी तिनीहरूलाई मन्दिर भन्न सक्छौं ? ती या त शिवालय हुन् वा समाधिस्थल, शक्तिपीठ वा अन्य कुनै पूजास्थल हुन्।
मन्दिर मुख्यतया उत्तर वा उत्तरमुखी हुनुको कारण यो हो कि उत्तरबाट आउने ऊर्जाको प्रभावले ध्यान र प्रार्थनाको लागि उत्तम वातावरण सिर्जना गर्दछ। मन्दिर पनि पूर्वतिर फर्केको हुन सक्छ, तर त्यसको ढोका र गुम्बजको निर्माणमा विशेष ध्यान दिइन्छ।
प्राचीन मन्दिरहरू ध्यान वा प्रार्थनाका लागि थिए। ती मूर्तिहरू ती मन्दिरका स्तम्भ वा पर्खालहरूमा टाँसिएका थिए। मन्दिरमा पूजापाठ थिएन । खजुराहो, अजन्ता–इलोरा, कोणार्क वा दक्षिणका प्राचीन मन्दिरहरूको संरचना हेर्नुभयो भने मन्दिरहरू कस्ता छन् भन्ने थाहा हुन्छ।
ध्यान गर्ने वा प्रार्थना गर्ने सम्पूर्ण मण्डली सकिएपछि त्यस्ता मन्दिरहरूमा पूजा गर्ने चलन बढ्यो। पूजाको प्रचलनका कारण मध्ययुगीन कालको अन्त्यमा मनमानी मन्दिरहरू निर्माण भएका थिए। मनमानी मन्दिरहरूबाट मनमानी संस्कारको जन्म भएको थियो, जसलाई वेद मान्न सकिँदैन।
पृथ्वीको दुई छेउ छ– एउटा उत्तरी ध्रुव र अर्को दक्षिण ध्रुव। पूजा वा प्रार्थना उत्तरतिर फर्केर गरिन्छ, त्यसैले प्राचीन मन्दिरहरूले पूर्व र उत्तर वा पूर्व बीचका सबै मन्दिरहरूको ढोकाको दिशामा विशेष ध्यान दिन्छन्। हाम्रा प्राचीन मन्दिर वास्तुकारहरूले पृथ्वीमा ऊर्जाको सकारात्मक केन्द्रहरू खोजे र फेला पारे र त्यहाँ मन्दिरहरू निर्माण गरे।
मन्दिरमा घण्टी बजाउने चलन पनि परापूर्वकालदेखि नै सुरु भएको थियो । यसको प्रमाण धेरै प्राचीन मन्दिरका भित्तामा रहेका मूर्तिकला, भित्तेचित्र आदिबाट थाहा पाउन सकिन्छ।
घण्टी बजाउनुमा दुईवटा कारण थिए– पहिलो घण्टी बजाएर सबैलाई प्रार्थनाका लागि बोलाउने र सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने। सृष्टि प्रारम्भ हुँदा जुन नाद थियो घण्टीको ध्वनिलाई त्यही नादको प्रतीक मानिन्छ । ओंकार वाचनले पनि त्यही नाद जागृत हुन्छ।
नियमित घण्टी बज्ने ठाउँको वातावरण शुद्ध र पवित्र रहन्छ। यसले नकारात्मक शक्तिहरू हटाउँछ। नकारात्मकता हटाउँदा समृद्धिको ढोका खुल्छ । बिहान र बेलुका मात्रै घण्टी बजाउने नियम छ, त्यो पनि लयबद्ध रूपमा । घण्टी वा घण्टालाई समयको प्रतीक पनि मानिन्छ। प्रलयको दिन आउँदा यस्तै आवाज आउने विश्वास गरिन्छ।
ऊर्जा केन्द्र मन्दिर
धेरै प्राचीन मन्दिरहरू त्यस्ता स्थल वा पहाडहरूमा बनेका छन्, जसको माध्यमबाट चुम्बकीय तरंगहरू घना भएर जान्छ। यस्ता ठाउँमा बनेका मन्दिरहरूमा मूर्तिहरूलाई चुम्बकत्वको प्रभाव बढी हुने ठाउँमा राखिन्थ्यो। यहाँ तामाको छाता र तामाको पाता राखिएको हुन्थ्यो र आज पनि कतिपय ठाउँमा राखिन्छ । तामाले विद्युत र चुम्बकीय तरंगहरू अवशोषित गर्दछ।
यसरी जो जो हरेक दिन मन्दिरमा गएर यस मूर्तिलाई घडीको दिशामा परिक्रमा गर्छ, उसले यो ऊर्जा ग्रहण गर्छ। यसले उसलाई मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य लाभ दिन्छ। यद्यपि यो एक ढिलो प्रक्रिया मान्न सकिन्छ तर यसले मस्तिष्कमा सकारात्मक ऊर्जाको विकास गर्दछ।
यस बाहेक मूर्तिको अगाडि जलाइएको दियोले तापको ऊर्जा वितरण गर्छ र शंख–घण्टीको ध्वनि र निरन्तर मन्त्रोच्चारबाट ब्रह्माण्डीय ध्वनि उत्पन्न हुन्छ, त्यसपछि यसले मन र मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गरी ध्यानधारण गर्दछ। मन्त्रमुग्ध हुनु भनेको यही हो।
यसबाहेक मन्दिरमा तामाको भाँडोमा तुलसी र कपूर मिसाएर पानी भरेर सेवन गर्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ, ब्रह्म–रन्ध्रमा शान्ति मिल्छ । यस्ता मन्दिरमा पवित्र आत्मा लिएर पूजापाठ गर्नुभयो भने तपाईंको माग अवश्य पूरा हुनेछ।
मन्दिरमा शिखरहरू हुन्छन्। उर्जा तरंगहरू र ध्वनि तरंगहरू शिखरको भित्री सतहमा ठोक्किएपछि व्यक्तिमा खस्छन्। यी परावर्तित बीम तरंगहरूले मानव शरीरको आवृत्ति कायम राख्न मद्दत गर्दछ। यसरी मानिसको शरीर बिस्तारै मन्दिरको भित्री परिवेशमा समायोजन हुन्छ। यसरी मानिसले अपार सुख अनुभव गर्छ।
पुराना मन्दिरहरू पृथ्वीका सबै सकारात्मक ऊर्जाका केन्द्र हुन्। यी मन्दिरहरू आकाशीय ऊर्जाको केन्द्रमा अवस्थित छन्। यस्तो सकारात्मक उर्जाको केन्द्रमा जब मानिस मन्दिरमा खाली खुट्टा जान्छ, यसले उसको शरीरलाई अर्थ दिन्छ र त्यसमा ऊर्जाको प्रवाह हुन थाल्छ।
जब व्यक्तिले मूर्तिसँग हात जोड्छ, शरीरको ऊर्जा चक्र चल्न थाल्छ। जब व्यक्तिले आफ्नो शिर झुकाउँछ, तब मूर्तिबाट प्रतिबिम्बित पृथ्वी र आकाशीय तरंगहरू टाउकोमा खस्छन् र मस्तिष्कमा रहेको आज्ञा चक्रलाई असर गर्छ। यसले शान्ति र सकारात्मक विचारहरू ल्याउँछ, जसले दुःख र पीडा कम गर्छ र उज्ज्वल भविष्य दिन्छ।
सबै धर्मका आ–आफ्नै प्रार्थनाघरहरू ह्न्छन्। ती प्रार्थना स्थलहरूमा जाने समय र समय तोकिएको हुन्छ। बौद्ध गुम्बा, सभाघर, गिर्जाघर, मस्जिद र गुरुद्वारामा पूजापाठ गर्ने मिति र समय तोकिएको हुन्छ, हिन्दू मन्दिरहरूमा पनि निश्चित मिति र समय हुन्छ । यसबाहेक हिन्दू मन्दिरहरूमा जाने नियमहरू के छन् ?
धेरै मानिस मन्दिरमा कुरा गर्छन्, मोबाइलमा उपस्थित हुन्छन् र मोजा लगाएर हिँड्छन्। हात जोडेर उभिन्छन् तर ध्यान अर्कै हुन्छ । आरती अधुरो छोडेर जान्छन् । यसबाहेक मन्दिरको नियमविपरीत यस्ता धेरै कुरा छन् । यस्ता कर्मबाट न देवता प्रसन्न हुन्छन् न त तपाईंको माग पूरा हुन्छ। पापरहित होस् वा पुण्यकर्मी, अवश्य मन्दिर–अपराधी मानिनेछ।
भविष्य पुराणका अनुसार पूजा गर्दा पूर्ण विधिपूर्वक गर्नुपर्छ । जो अनुष्ठान गर्छ, त्यो पावन बन्छ। सत्कर्मको अधिकारी बन्छ। आचमनको विधि के हो भने हात–खुट्टा धोएपछि पूर्वदेखि उत्तरतिर फर्केर पवित्र स्थानमा आसनमा बस्ने। दाहिने हातलाई जाँघभित्र राखेर दुबै खुट्टा बराबर राख्ने । त्यसपछि जलको आचमन गर्ने।
आचमन गर्दा हत्केलामा ५ तीर्थहरुको उल्लेख गरिएको छ– १. देवतीर्थ, २. पितृतीर्थ, ३. ब्रह्मतीर्थ, ४. प्रजापत्यतीर्थ र ५. सौम्यतीर्थ।
औँलाको जरामा ब्रह्मतीर्थ, कान्छी औंलाको जरामा प्रजापत्यतीर्थ, अग्र औँलामा देवतीर्थ, तर्जनी र औंलाको बीचमा पितृतीर्थ र हातको बीचमा सौम्यतीर्थ रहेको बताइएको जुन देवकर्ममा प्रशस्त मानिन्छ ।
आचमन सधैँ ब्रह्मतीर्थबाट गर्नुपर्छ। आचमन गर्नुअघि औँलाहरू मिलाएर, एकाग्र भएर अर्थात् एक शब्द नबोली तीन पटक पवित्र जलमा आचमन गरेमा राम्रो फल प्राप्त हुन्छ। आचमन सधैँ तीन पटक गर्नुपर्छ।
पहिलो आचमनबाट ऋग्वेद, दोस्रोबाट यजुर्वेद र तेस्रोबाट सामवेद सन्तुष्ट हुन्छन्। आचमन गरेपछि दाहिने हातको औँलाले मुख छोएपछि अथर्ववेद सन्तुष्ट हुन्छन् । आचमन गरेपछि टाउकोमा अभिषेक गर्दा भगवान शंकर प्रसन्न हुन्छन् । दुवै आँखाको स्पर्शले सूर्य, नाकको स्पर्शले वायु र कानको स्पर्शले सबै ग्रन्थीहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। यस्तो आचमन गर्नाले पूजाको दोब्बर फल प्राप्त हुने जनविश्वास छ ।
सोमबार शिवको मन्दिर, आइतबार विष्णुको मन्दिर, मंगलबार हनुमानको मन्दिर, शनिबार शनि मन्दिर, बुधबार दुर्गाको मन्दिर र शुक्रबार काली र लक्ष्मीको मन्दिर जाने उल्लेख छ । बिहीबारलाई गुरुहरुको दिन मानिन्छ । यस दिन सबै गुरुहरूको समाधि मन्दिरको दर्शन गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
आइतबार र बिहीबार धर्मका दिन
विष्णु देवताहरूमध्ये सर्वोच्च स्थानमा छन् र वेदका अनुसार सूर्य यस संसारको आत्मा हो। शास्त्र अनुसार आइतबारलाई उत्तम दिन मानिन्छ । आइतवार (विष्णु) पछि देवताहरूबाट भएकोले बिहीबार (देव गुरु बृहस्पति) प्रार्थनाका लागि उत्तम दिन मानिन्छ।
हिन्दू मन्दिर जान पनि उपयुक्त समय चाहिन्छ। तत्वदर्शी ऋषिहरूले सूर्य र तारारहित दिन र रातको सन्धिलाई साँझ मानेका छन्। सन्ध्या वन्दनालाई ‘सन्ध्योपासना’ पनि भनिन्छ। सन्धिकालमा मात्र सन्ध्यावन्दना गरिन्छ।
सन्धि पाँच पटक (समय) भए पनि बिहान र बेलुका दुई पटकको सन्धि मुख्य अर्थात् सूर्योदय र अस्ताउने समय हो । यस समयमा मन्दिर वा एकान्तमा शौच, आचमन, प्राणायाम आदि गरेर निराकार भगवानलाई गायत्री श्लोकको प्रार्थना गरिन्छ।
दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म मन्दिरमा पूजा, आरती, पुजा आदि गर्न अर्थात बिहान ११ बजेअघि मन्दिरमा आउन वा दिउँसो ४ बजेपछि मन्दिरमा जान निषेध गरिएको हुन्छ ।
संध्योपासना ४ प्रकारका हुन्छन्– १. प्रार्थना, २. ध्यान, ३. कीर्तन र ४. पूजा–आरती। मानिसलाई जुन कुरामा विश्वास छ, उसले त्यसै गर्छ।
पूजा–आरतीः पूजा–आरती एक रासायनिक प्रक्रिया हो। यसले मन्दिर भित्रको वातावरणको पीएच मान (तरल पदार्थको मापनको एकाइ) कम गर्छ, जसले व्यक्तिको पीएच मानलाई असर गर्छ। यो यो आयनिक कार्य हो जसले भौतिक रसायन परिवर्तन गर्दछ। यस कार्यले रोगहरू निको पार्न मद्दत गर्दछ। औषधिले पनि त्यही काम गर्छ, जुन मन्दिरमा गएर हुन्छ।
प्रार्थनाः प्रार्थनामा शक्ति हुन्छ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले मन्दिरको ईथर माध्यमसँग जोडिन सक्छ र भगवानलाई आफ्नो सन्देश सुनाउन सक्छ। दोस्रो, प्रार्थना गर्दा मनमा आस्था र सकारात्मक भावना जागृत हुन्छ, जुन जीवनको उन्नति र सफलताका लागि अति आवश्यक हुन्छ।
कीर्तन–भजनः कीर्तन ईश्वर, भगवान् वा गुरुप्रति आफ्नो भक्ति वा समर्पण व्यक्त गर्ने शान्तिमय र संगीतमय माध्यम हो। यसैलाई भजन भनिन्छ। पूजाले शान्ति मिल्छ। पूजा गर्ने नियम पनि छन् । गीतको पङ्क्तिमा रचिएका भजनहरू भजन होइनन्। शास्त्रीय संगीत अनुसार गरिने भजनहरू भजन हुन्। सामवेदमा शास्त्रीय संगीतको उल्लेख छ।
ध्यानः ध्यानको अर्थ एकाग्रता होइन, ध्यान भनेको मूलतः जागरूकता हो। जागरूकता। इन्द्रियहरू। साक्षी भावना। ध्यान भनेको हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित सबै कुरामा ध्यान दिनु हो। शरीरमा, दिमागमा र वरपर के भइरहेको छ। विचार र भावना को गतिविधिहरुमा। यसतर्फ ध्यान दिने थोरै प्रयासले हामी अमृततर्फ एक–एक कदम अगाडि बढ्न सक्छौँ। ध्यानलाई ज्ञानीहरूले उत्तम मान्छन्। ध्यानले मनोकामना पूरा हुन्छ र ध्यानले मोक्षको द्वार खुल्छ।
तपाईंको प्रार्थना वा ध्यानको महत्व तब हुन्छ जब तपाईं भव्य मन्दिरमा जानुहुन्छ। गुम्बज वा पिरामिड जस्ता भव्य मन्दिरहरू तपाईंको समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम छन्। आकाशमुनि बसेर भगवान्को अगाडि प्रार्थना गर्दा त्यसबाट निस्कने तरंगहरू ब्रह्माण्डमा कतै छरिन्छन् भने मन्दिरमा बनेको गुम्बज जस्तो आकाशमुनि बसेर गरेको पुजा गोलाकार बनेर बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
मन्दिरमा बसेर यति शक्तिशाली बन्छ कि सम्बन्धित देवतासम्म पुग्छ वा ब्रह्माण्डको घेरामा पुग्छ भन्ने तपाईंको विश्वास हो या मनको विचार। जसरी तपाईं सोच्नुहुन्छ र महसुस गर्नुहुन्छ, उही चित्र तपाईंको अवचेतन दिमागमा बनाइन्छ र तपाईंको भविष्य पनि हुन्छ। ध्वनि र चित्रको विज्ञान बुझ्नुहोस्।
र त्यही कुरा जब तपाईं गुम्बजमुनि गर्नुहुन्छ अर्थात् आफ्नो सारा हृदयले आफ्नो भगवान्को नामजप गर्नुहुन्छ, त्यसबाट निस्कने छालहरू गुम्बजभरि गुन्जिन्छन्। मन्दिरको गुम्बजले गोला (वृत्त) बनाउँछ तपाईंको प्रतिध्वनि ध्वनि तपाईंलाई फर्काएर। त्यो सर्कलको आनन्द अद्भुत छ। खुला आकाशमुनि नामजप गर्नुभयो भने घेरा बन्दैन र भगवानकाे पूजा ब्रह्माण्डमा छरिन्छ। गुम्बजको फेदमा प्रार्थना सर्कल बन्नेछ, जुन लामो समयसम्म जीवित रहनेछ र सम्बन्धित देवतामा पुग्नेछ।